Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India na Germany Nkwekọrịta ndị njem nlegharị anya bịanyere aka
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
India na Germany bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta njem njem abụọ
dere Anil Mathur – eTN India
India na Germany bịanyere aka na nkwekọrịta njem njem abụọ site na Indian Association of Tour Operators (IATO) na Deutscher Reiseverband eV, (DRV) Association Njem German iji kwalite njem njem ụzọ abụọ n'etiti mba abụọ ahụ site na ịme ihe kwesịrị ekwesị iji weghachite njem nlegharị anya ozugbo ọnọdụ. bụ ihe nkịtị, Maazị Rajiv Mehra Onye isi ala IATO kwuru.
IATO na DRV ekwenyela ime ezi mbọ iji mee ka ndị otu ya mara maka ịbụ ndị otu abụọ, uru ya, na ihe omume na India na Germany.
Organizationstù abụọ a ga -emekwa mmemme mgbanwe njem na mmemme ọzụzụ na nkwado.
Mbinye aka nke nkwekọrịta a ga -ezigakwa mba ndị ọzọ na Europe ozi na India dị njikere ịnabata ndị njem si mba ọzọ niile.
Maazị Norbert Fiebig, Onye isi oche - Deutscher Reiseverband eV, Association Njem German, na Maazị Rajiv Mehra, Onye isi oche, Indian Association of Tour Operators bịanyere aka na nkwekọrịta imekọ ihe ọnụ iji mee nke a n'ihu.
N'okpuru nkwekọrịta a, ma IATO na DRV ekwenyela ime ezi mbọ iji mee ka ndị otu ya mara maka ịbụ ndị otu abụọ ahụ, uru ya na ihe omume ya. na India na Germany. A ga -akpọ ndị ọrụ nke otu abụọ ahụ ka ha bịa mgbakọ ha na -enwe kwa afọ, ha ga -eduzi mmemme mgbanwe njem na mmemme ọzụzụ na nkwado.
Germany bụ otu n'ime ahịa isi mmalite maka njem nlegharị anya na India, nke a ga -enye aka ịtụte njem nlegharị anya na India ma nyere ndị na -eme njem nlegharị anya si Germany aka ịmaliteghachi ire ngwugwu India.
Nkwekọrịta nke DRV na IATO bịanyere aka na ya agaghị emepe ọnụ ụzọ maka Ndị otu IATO iji jikọọ na ndị otu DRV mana ọ ga-ezigakwa ozi na mba ndị ọzọ na Europe na India dị njikere ịnabata ndị njem mba ofesi ozugbo ebugharị Visa na e-Tourist na ụgbọ elu mba ofesi.
India na Germany nwere ogologo akụkọ ọnụ. India bụ akụkụ nke okpueze Britain n'oge WWI, na n'oge ahụ, e nyere ndị agha Indian Indian iwu ka ha tinye ndị agha na mbọ agha Allied, gụnyere na Western Front. Ndị na-akwado nnwere onwe nọ n'etiti ndị agha colonial chọrọ enyemaka ndị German n'ị nweta nnwere onwe India, nke mere ka ndị Hindu-German Conspiracy n'oge Agha I.wa Mbụ.
Republic nke India e hiwere ọhụrụ bụ otu n'ime mba ndị mbụ kwụsịrị Germany agha steeti mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị ma ha ekwupụtaghị nkwụghachi agha site na Germany n'agbanyeghị na ndị agha 24,000 na-eje ozi na British Indian Army nwụrụ na mkpọsa ibuso Nazi Germany agha. .
India ejirila West Germany na East Germany jigide mmekọrịta diplọma ma kwado njikọta ha na 1990.
Onye isi ala German Merkel na Prime Minista India Modi
N'ime oge ọhụụ, Onye isi ala German Angela Merkel emeela ọtụtụ nleta gọọmentị na India nke dugara na mbinye aka nke ọtụtụ nkwekọrịta na -agbasa mmekorita nke abụọ, nke kacha ọhụrụ bụ na Nọvemba 2019 mgbe nkwekọrịta 17 dị n'etiti India na Germany.
Ememe ekeresimesi aghọọla emume ọgbaghara na...
Mgbawa ugwu Japan na -awụpụ ntụ ntụ ruo na mbara igwe
Ịdenye ngwungwu karịa ịnọrọ akụ na ụba...
Njem njem nlegharị anya ebidola nke mbụ n'ụwa...
Mwakpo ụjọ na-eme na Uganda
Ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ n'etiti Newark Liberty na Reagan...
Idobe Seychelles kacha elu na Hungary
Middle East ụgbọ elu ghọrọ Airbus Skywise Health…
Jet2 nyere iwu ụgbọ elu A15neo ọhụrụ 321
Ọdịnihu UNWTO nke Saudi Arabia na Spain mebere: Ọhụrụ…
Minista njem nlegharị anya Jamaica: Worldwa ahụike ọhụrụ &…
A ga-akpọ Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner nke mbụ…
The Mitchells vs The Machines: Ihe nkiri Ezinụlọ ọhụrụ kacha mma
New San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam na ...
Ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ugbu a amanyere iwu ịbanye VIA Rail ...
Lithuania kwuwapụta ọnọdụ mberede na Belarusian…
"Ihe ụtọ nke Seychelles" na-eme ememe mbụ ...
Azịza UNWTO nye Kenya: Onye nwere ike ịkwụsị odeakwụkwọ a…
Nkwekọrịta ọhụrụ Pan Pan Pacific kwadoro ...
Nchịkọta nka ọhụụ na -adịghị mma nke Mona Hatoum binyere aka wepụtara ...